ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု ကို စိုးရိမ်လို့ အိန္ဒိယ နဲ့ သီရိလင်္ကာ အပြင်မထွက်ရ အမိန့်ထုတ် နဲ့ နိုင်ငံတကာ ဗိုင်းရပ်စ် သတင်းများ
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု ကို စိုးရိမ်လို့ အိ...
22 มี.ค. 2563 - 20:11 น.
လူတွေကို အိမ်ထဲမှာသာ နေကြဖို့ အစိုးရ က တိုက်တွန်း ထား
ကာဖျူး အမိန့် ထုတ်ထားတဲ့ ကိုလံဘို မြို့
အကျဉ်းသား တစ်ဦးမှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ခံထား ရ
ရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း တချို့ဟာ အဲဒီ တားမြစ်ချက်ကို လိုက်နာ ခဲ့ခြင်း မရှိ
ကိုဗစ် နိုင်တင်း ကူးစက် ခံထားရ နိုင်တယ်လို့ ယူဆလို့ ရတဲ့ လူ ၄၀၀၀ ကျော်ကို အစိုးရ တာဝန်ရှိသူ တွေက လိုက်လံ စုံစမ်း
လူသားချင်း အကူအညီ ပေးဖို့ ဆိုတဲ့ အမေရိကန် ရဲ့ ကမ်းလှမ်း မှု ကိုတော့ ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင် အယာတိုလာ ခါမေနီက ပယ်ချ
ရုရှား စစ်တပ် က ဆရာဝန်တွေ၊ ပိုးမွှားကင်းစင်ရေး အတွက် အသုံးပြုတဲ့ စစ်ကား တွေနဲ့ ဆေးပစ္စည်းတွေကို ပို့ဆောင် ပေး
อัลบั้มภาพ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု ကို စိုးရိမ်လို့ အိန္ဒိယ နဲ့ သီရိလင်္ကာ အပြင်မထွက်ရ အမိန့်ထုတ် နဲ့ နိုင်ငံတကာ ဗိုင်းရပ်စ် သတင်းများ